CPEC က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး အားကောင်းရန် အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပြော - Xinhua News Agency
CPEC က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး အားကောင်းရန် အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပြော
အစ္စလာမ်မာဘတ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်-ပါကစ္စတန် စီးပွားရေးစင်္ကြံ (CPEC) သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် ဒေသတွင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် မတူညီသောအခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း ပါကစ္စတန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။CPEC ၏ အလားအလာအပြည့်အဝကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရန် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများစွာ အတွက် လိုအပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် လျင်မြန်သော စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အဆင့်တိုင်းနှင့်အတူ နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု၏ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သော နေရာများ တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂေဟ-လူမှုယဉ်ကျေးမှု သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အာရှအင်စတီကျု ဥက္ကဋ္ဌ Zahid Latif Khan က CPEC ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“CPEC ဟာ ပါကစ္စတန်ရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ အထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ် နောက်ထပ်ထင်မြင်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကြား လက်ရှိ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ပူးတွဲလျက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကော်မတီက စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နယ်ပယ်တွေမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ တွန်းအားသစ်တွေ ရရှိစေပါတယ်။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုက ခွန်အားသစ် လေ့လာခြင်းပါပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းက ၎င်းနိုင်ငံများအား အညွှန်းကိန်း မည်သို့တိုးတက်လာသည်ကို ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်နိုင်ငံများ အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံများမှ လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Khan က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက အဆိုပြုထားသော ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ အဆိုပြုချက်၏ အဓိက စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော CPEC ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသည် တရုတ်၏ အတွေ့အကြုံများမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါကစ္စတန်အနေဖြင့် CPEC အောက်တွင် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု မဟာဗျူဟာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သလို စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စီးပွားရေးအား ခေတ်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်၌ အဓိကနေရာတွင် ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်ရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု မူဝါဒ ဖန်တီးရေးလိုအပ်ချက်ကို အဆိုပါ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
CPEC provides opportunities for Pakistan to strengthen connectivity, national economy: expert
ISLAMABAD, Nov. 18 (Xinhua) — The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) has been providing multifaceted opportunities for Pakistan to further enhance regional connectivity and the national economy,aPakistani expert said on Thursday.
To exploit the full potential of CPEC, Pakistan will have to build reliable and efficient avenues of connectivity on the principle of win-win cooperation, as with every step of industrialization and rapid economic growth the need for connectivity multiplies, Zahid Latif Khan, chairman of Asian Institute of Eco-civilization Research and Development, said ataseminar on CPEC here.
“There is no second opinion that CPEC is going well and contributing to the economic growth and development of Pakistan. The recently held 10th Joint Cooperation Committee meeting between China and Pakistan has givenanew impetus to the work and cooperation in the fields of industry, renewable energy and transportation. The connectivity is observinganew vigor,” he said.
Khan said that Pakistan can learn from the experience of leading economies of the world, especially from China, how connectivity helped these countries grow exponentially.
Being part of CPEC, which isaflagship project of the China-proposed Belt and Road Initiative, Pakistan can benefit from the experience of China, he said, adding that “Pakistan can work on connectivity strategy and tag it with industrial development and modernization of economy under CPEC.”
The expert also highlighted the need of devisingaconnectivity policy, which can help Pakistan and partner countries boost trade and attract foreign direct investment and place them at the prime place in the global supply chain. Enditem
Photo taken on Jan. 29, 2018 showsaview of Gwadar Port in southwest Pakistan’s Gwadar. (Xinhua/Ahmad Kamal)
တရုတ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက်အတွက် ခိုင်မာသော အထောက်အပံ့ပေး
CPEC က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသောဧရိယာများထံ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေး
တရုတ်နိုင်ငံ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဂွါဒါဒေသတွင် သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်း တည်ဆောက်မှုပြီးစီး